‘दाँतका नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
‘दाँतका नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी’
२०७१ चैत्र १, आईतवार ०२:०६ गते
भरतपुर । नेपालमा पर्याप्त दाँतका डाक्टर नहुँदा समस्या बढेको छ । अधिकांश जिल्लामा दाँतका डाक्टर नै छैनन् । भएका दाँतका डाक्टरले पनि धेरैलाई सेवा दिन गाह्रो भएको छ । जसका कारण नक्कली दाँत डाक्टरहरु देखा परेका छन् ।
नेपाल डेन्टल एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा.शुभप्रभात श्रेष्ठले विदेशका फर्जी दाँतका डाक्टरहरु आएर नेपालमा उपचार गर्न थालेका छन् । त्यसैले उपचार गर्ने व्यक्ति सक्कली हो वा होइन पक्का गर्न सर्वसाधारणलाई उनले अपिल गरेका छन् । आफूलाई सक्कली डाक्टर भनेर चिनाउने नक्कली दाँतका डाक्टरबाट उपचार भइरहेको उनले बताए ।
‘मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र देखाउन सक्दैन भने त्यस्तासँग उपचार गराउनु हुँदैन । दाँतको उपचारका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने उपचार गर्न जो अगाडि आउँछ ऊसँग प्रमाणपत्र माग्नुहोस्’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । बिहान र साँझ दाँत माझ्न र दाँत डाक्टरको आधिकारिकता यकिन गरेर मात्रै उपचार गर्न आफूहरुले अभियान नै चलाएको उनले बताए ।
नेपालभर १८ सयको हाराहारीमा दाँतका डाक्टरहरु रहेको उनले बताए । उनका अनुसार एकजना डाक्टरले सहरमा नौ हजार र गाउँमा ५६ हजारलाई सेवा दिनु परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्ता देशहरुमा एकजना डाक्टरले बढीमा सात हजार दुई सय बिरामीलाई सेवा दिन उपयुक्त हुने निचोड निकालेको डा.श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘डाक्टर अपुग हुँदा सर्वसाधारणलाई सेवा पाउन गाह्रो भएको छ । दाँतको नाममा दक्षलेभन्दा अरुले बढी फाइदा लिएका छन्’ श्रेष्ठले भने । दाँत डाक्टरसँग केही समय काम गरेपछि आफँै पसल थापेर उपचार सुरू गर्नेसम्मका घटनाहरु हुन थालेको उनले बताए । काठमाडौं, वीरगञ्ज र चितवनजस्ता सहरमा विदेशीहरुले समेत उपचार गरेको उनले बताए ।
‘अनाधिकृत व्यक्तिहरु यो क्षेत्रमा बढ्न थालेका छन् । सरकारले अनुगमन गर्न आवश्यक भएको छ । हामी पनि यस्तो काम रोक्न लागेका छौं । सर्वसाधारण पनि होशियार बन्न जरूरी छ’ केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार देशका ४० जिल्लामा दाँतका डाक्टर नै छैनन् । यस्तो अवस्था रोक्न एक जिल्लामा कम्तीमा एक दाँत डाक्टरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘दाँतको समस्याले मान्छेको तत्कालै मृत्यु हुँदैन तर दाँतमा समस्या आउँदा मान्छेको दैनिक कामकाजमा समस्या आउँछ । यसबाट हुने नोक्सानी र हैरानी धेरै छ ।’ डा. श्रेष्ठले भने । पहिला पहिला दाँत चिकित्सकलाई प्रोत्साहन नै थिएन । १० वर्षयता मात्रै केही विकास भएको छ ।
‘१० वर्षअघि म भरतपुर अस्पतालमा आउँदा दिनमा पाँचजना उपचारका लागि आउँथे । सुविधा केही थिएन । अहिले यो १० गुण बढेको छ । सुविधाहरु पनि थपिएका छन् । तर पर्याप्त भने छैन’ भरतपुर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत दाँत डाक्टर तथा नेपाल डेन्टल एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष डा.अजय न्यौपानेले भने । दाँतमा टाँसिने खालका चाउचाउ, चिप्स, चकटेल खाने बानी बढेको, दाँत माझ्ने चलन अझै नबढेको र समयमा दाँत उपचार गर्ने परिपाटी नबस्दा नेपालमा दाँत रोग समस्या बनेर आएको डा.न्यौपानेले बताए । बच्चामा दाँत कीराले खाने र पाका उमेरका व्यक्तिमा गिंजा सुनिने समस्या रहेको उनले बताए ।
आउँदो शुक्रबार अर्थात् २० मार्च विश्व दाँत स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ । ‘फ्लोराइड युक्त टुथ पेष्टले बिहान साँझ दाँत माझ्ने बानी बसालाँै र समस्या आएका खण्डमा आधिकारिक डाक्टरसँग सेवा लिने गरौँ’ भन्ने सन्देश फैलाउन त्यो बेलामा हामी विशेष कार्यक्रम गर्दै छौँ’ डा. न्यौपानेले भने ।